Ammaanka Magaalladda Baydhabo oo la adkeeyay kaddib Qarax shalay ka dhacay Magaalladda |
Baydhaba (estvlive) 09/09/2017
Inta la ogyahay saddex qof oo uu ku jiro qofkii is-Qarxiyay, ayaa ku geeryooday Qarax gelinkii dambe ee shalay ka dhacay Magaalladda Baydhabo ee xarunta gobolka Baay.
Mas’uuliyiinta maamulka Koonfur-galbeed, waxaa ay xaqiijiyeen in saddex qof oo kale ay ku dhaawacmeen Qaraxa.
Wasiirka Amniga maamulka Koonfur Galbeed Xasan Xuseen Maxamed, ayaa warbaahinta gudaha magaalladda Muqdishu u xaqiijiyay in qof miineysan uu isku-Qarxiyay nawaaxiga makhaayad lagu magacaabo Barwaaqo oo kutaalla bartamaha Magaalladda.
“Qaraxa waxaa ku dhintay dad shacab ah, waxaan Alle uga baryeynaa kuwii ku dhintay in uu Jannada ka waraabiyo, kuwii ku dhaawacmayna uu caafiyo”, ayuu hadalkiisa sii raaciyay Wasiirka Amniga Koonfur Galbeed.
Goobtii Qaraxa uu ka dhacay waxaa gaaray saraakiisha laamaha ammaanka, kuwaas oo qiimeyn ku sameynayay khasaaraha, waxaana ay ku baaqeen in la xoojiyo ammaanka guud ahaan deegaannada maamulka-Koonfur-galbeed.
Ciidamada ammaanka Magaalladda Baydhabo ee xarunta Gobolka Baay ayaa Xalay illaa maanta baaritaanxo Xoog leh ka wada xaafaddaha kala duwan ee Magaalladda Baydhabo.
Ma jirto cid sheegatay mas’uuliyada weerarkii gelinkii dambe ee shalay ka dhacay Magaalladda.
Bishii April ee sanadkan, kooxo hubeysan ayaa bam-gacmeen ku tuuray fariisin ciidanka maamulka koonfur-galbeed ay ku leeyihiin xaafadda Buulo Usleey oo ka mid ah xaafadaha magaalladda Baydhabo.